Shan ka mid ah Al shabaab oo la xaqiijiyay inay ku dhinteen qarax ka dhacay duleedka Baladweyne | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Shan ka mid ah Al shabaab oo la xaqiijiyay inay ku dhinteen qarax ka dhacay duleedka Baladweyne
Arbaco,October,11,2017(HNN) Shan ka mid ah xoogga Al shabaab ayaa Ku dhimatay gaari ay sarnayeen oo kula qarxay deeganka Luuqa Jeelow oo qiyaastii 22 KM dhanka koonfureed ka xiga Magalaada Baladweyne ee Xaruunta gobolka Hiiraan.
Dadka deeganka luuqa jeelow ayaa sheegay in shantan ruux ay sarnayeen gaariga islamarkana ay ka yimadeen deeganka Buqaqable oo ah saldhiga ugu weyn ee Al shabaab ay ku lee yihiin Gobolka Hiiraan islamarkana u kula qarxay deeganka.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada dowlada ayaa Hiilnews u sheegay in qarax ku dhinteen Saraakiil ka tirsana Al shabaab.
Ilaa iyo hadda lama oga halka loo waday gaariga laga soo buuxiyay waxyabaha qarxa ee Al shabaab kula qarxay deeganka luuqa jeelow.
Al shabaab ayaa 10-kii bishi la soo dhafay ee September weerar ismiidaamin ah Ku qaaday maqaayad ku tala afaafka hore ee laga galo xaruunta Maamulka Gobolka Hiiraan iyado weerarkaasi ay ku dhimatay saddex ruux oo u Ku jiro qofkii Weerarka Fuliyay waxana markii dambe dhawacii u geeriyooday Allaha unaxariiste Wariye Cabdulahi Cismaan Macalin oo ka shaqeyna jiray Jubbaland TV.